Azuqua: esory ny siloo ary ampifandraiso ny Cloud sy SaaS Applications | Martech Zone
Alatsinainy, Novambra 23, 2015 Asabotsy 13 Febroary 2021 Matt Shanahan
Kate Legett, VP ary mpandalina lehibe ao amin'ny Forrester tamin'ny bilaogy septambra 2015 dia nanoratra tao amin'ny lahatsorany, Manaparitaka ny CRM. Lohahevitra iray mampiady hevitra:
Tazomy eo anoloana sy afovoan'ny orinasanao ny traikefan'ny mpanjifa. Hamarino tsara fa manohana ny mpanjifanao ianao amin'ny faran'ny fiafaran'izy ireo amin'ny alàlan'ny fidirana mora, mahomby ary mahafinaritra, na dia miampita sehatra teknolojia aza ny dian'ny mpanjifa.
Ny sombintsombin'ny CRM dia miteraka fanaintainana izay mahatsapa ny zavatra niainan'ny mpanjifa. Tatitra Cloud 2015 nataon'i Netsscope mitanisa fa ny orinasa antonony dia mampiasa fampiharana maherin'ny 100 manerana ny marketing sy CRM. Na dia mitarika fahombiazana lehibe aza ny fampiharana SaaS, mamorona fahasarotana ihany koa izy ireo ho an'ireo mpampiasa raharaham-barotra - toy ny fampidirina sy famakafakana ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa. Ohatra, eConsultancy nahita izany ny angon-drakitra mifindra eo anelanelan'ny rafitra (74%) dia iray amin'ireo fanamby maharary indrindra, ary hitan'i Bluewolf izany 70% n'ny mpampiasa Salesforce dia tsy maintsy mampiditra ny angona mitovy amin'ny rafitra maro.
Azuqua dia manampy ny orinasa hamaha ity 'fanaintainana amin'ny fampiharana azy ireo ity' amin'ny alàlan'ny fanamafisana ireo mpampiasa orinasa hampifandray ireo fampiharana cloud sy SaaS ao anatin'ny iray minitra, ao anatin'izany ny vahaolana vaovao antsoina hoe Azuqua ho an'ny fahombiazan'ny mpanjifa. Natao hialana amin'ny siloes noforonina tamin'ny CRM tsy mitovy, automatisation marketing, serivisy serivisy sy fanohanana, Azuqua for Customer Success dia mamela ny mpampiasa raharaham-barotra hampiditra data, hanamora ny fizotran-draharaha fitsikerana ary hifehy ny traikefan'ny mpanjifa. Azuqua ho an'ny fahombiazan'ny mpanjifa dia misy manomboka amin'ny $ 250 isam-bolana.
Azuqua ho an'ny fahombiazan'ny mpanjifa dia mahazo ny CRM, ny fanohanana ary ny fitantanana ny tetik'asa miasa miaraka amin'ny fanafoanana ny fidirana data. Amin'ny alàlan'ny fandefasana automatisation flow, ny ekipa mpivarotra, ny fanohanana ary ny fahombiazan'ny mpanjifa dia afaka miara-miasa hamorona traikefa mpanjifa ambony. Thomas Enochs, VP an'ny fahombiazan'ny mpanjifa ao amin'ny Chef
Azuqua ho an'ny Fahombiazan'ny mpanjifa dia manasongadina fampidirana fampiharana 40 mahery, ao anatin'izany ny FullContact, Gainsight, Marketo, Salesforce, Workfront ary Zendesk, ary ny onjam-piasa 15 namboarina ho tanjona. Isaky ny dingana amin'ny dian'ny mpanjifa, Azuqua mamela ny mpampiasa raharaham-barotra hampifandray ny fampiharana SaaS azy ireo, hanao automatisme ny firosoana amin'ny asa aman-draharaha, ary hifehy ny traikefan'ny mpanjifa.
Ny milina fahombiazan'ny mpanjifa voahosotra tsara dia mitaky ny hiarahan'ny fampiharana anao hahazoana data tsy miovaova aparitaka eo noho eo amin'ny teboka rehetra azo zahana amin'ny mpanjifa. Zava-dehibe ny fifanarahana sy ny fotoana ara-potoana, noho izany rehefa mampiditra tara fahatarana sy lesoka ireo fampiharana tsy mifandray, dia midika izany fa very ny karama. Ny vahaolana dia manamaivana ny fanaintainanao amin'ny alàlan'ny fiantohana ny angona avy amin'ny kaonty sy ny fifandraisana tsy miova amin'ny fampiharana rehetra, ny fampandrenesana sy ny fanairana ataon'ny mpampiasa dia ara-potoana ary ny fandefasana dia marina. Nikhil Hasija, CEO ary mpiara-manorina ao Azuqua
Azuqua ho an'ny fizotran'ny fahombiazan'ny mpanjifa dia misy:
Dia ny mpanjifa: misambotra sy mandrakitra an-tsoratra fahombiazana ho an'ny mpanjifa sy ireo faningana tsy azo ampiharina avy amin'ny fampiharana, onboarding, fiofanana ary consulting.
Mifandraisa fanangonana: afovoany ny kaonty sy ny angon-drakitra mifandraika amin'ny rafitra fifamatorana rehetra manomboka amin'ny fanohanana ka hatrany amin'ny marketing amin'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera.
karena: ampidiro amin'ireo loharanom-pahalalana momba ny fahombiazan'ny mpanjifa ivelany toa ny FullContact hanampiana data ho azy amin'ny kaonty sy ny firaketana ny fifandraisana.
Communications: manara-maso ireo hetsika na hetsika mahomby amin'ny mpanjifa ary mandefasa fanairana amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny mailaka, hafatra, na fandefasan-kafatra eo noho eo.
Orkestra data: miantoka ny fanavaozana ny kaonty vaovao na vaovao sy vaovao mifandraika amin'ny alàlan'ny fanohanana, fakan-kevitra, fanofanana, marketing, fiaraha-monina ary fampiharana hafa.
Orkestra fanodinana: mitazona ny lahasa sy ny olana hatrany amin'ireo fampiharana ireo.
Misorata anarana amin'ny fitsapana maimaim-poana an'i Azuqua
Raha mila fanazavana fanampiny, fitsidihana Azuqua.
Tags: azuquabluewolfCRMDatadata siloForresterFifandraisana fenofifandiranaKate Legettdata momba ny marketingfampifanarahana datafampidirana marketingmarketoNikhil HasijasalesforceThomas EnokaWorkfrontzendesk
Matt Shanahan dia CMO ao Azuqua, orinasa iray manampy ny orinasa hamita ny fivezivezena eo anelanelan'ny fampiharana SaaS, ao anatin'izany ny rafitra sosialy, mailaka, automatisation marketing na CRM izay manakiana ny fahombiazan'ny mpanjifa. Matt dia manana traikefa efa ho 30 taona eo amin'ny sehatry ny teknolojia, manomboka amin'ny Accenture ka hatramin'ny fanombohana. Mpandraharaha voaporofo izy amin'ny maha VP marketing sy fitantanana vokatra an'i Documentum hatramin'ny fanombohana hatramin'ny alàlan'ny fanolorana ho an'ny daholobe ary farany indrindra ho mpiara-manorina sy tetikady SVP ho an'ny Scout Analytics.
Ny fanjakan'ny Social Media Ecommerce
25 Novambra 2015 à 4:55
Ity dia lahatsoratra tena manaitra tokoa. Heveriko fa nanao ezaka be ianao tamin'ny famokarana ity lahatsoratra ity ary tena ilaina ho ahy sy ireo bilaogera hafa koa izany. Misaotra nizara lahatsoratra tena tsara.